Naing BSell | Item - ☀️Night View Glasses☀️🏙|Turn Night into Bright!!!
☀️Night View Glasses☀️🏙|Turn Night into Bright!!!
Kiss Beauty2in 1 Eyebrow Pen & Gel Liner
ပါးသိုငျးမှေးပေါကျမကျြခုံးမှေးဆံပငျပေါကျဆေး👉👉 Dr.Davey Healthy Serum ဆေး15000 / ks Made in Korea ကိုရီယား မိတျ ပါမှာ ယူလိုပါက.09975568804 09958310274 viber ဦးရပွေားကိုထိခိုကျစသေော ဓာတုပစ်စညျးမြားလုံးဝမပါဝငျပါ ဒါကွောငျ့ အမြိုးသား/အမြိုးသမီး အားလုံးယုံကွ
မြန်မာနိုင်ငံ ရှိမြို့ပေါင်း ၇၀ ကျော်ကို အိမ်အရောက်ငွေချေစနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပီရှင်
🏙☀️Night View Glasses☀️🏙
Turn Night into Bright!!!
ညအချိန် တဖက်မှ မီးကြီးထိုးလာသော ကားကြီးများကြောင့်အန္တရာယ်ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်နေပါသလား။🚫
👌ညဘက်မောင်းနှင်စဉ်အတွင်းမျက်မှန်တပ်ထားပါက မြင်ကွင်းကြည်လင်ပြတ်သားရှင်းလင်းပြီး သာမန်မျက်စိဖြင့်မြင်ရသောအလင်းထက် 💃၇ဆပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာမြင်ရပါတယ်
🚩တစ်မျိုးဝယ်ထားရုံ နဲ့နေ့ ရော ညအတွက်ပါ အသုံးဝင်ပါတယ်🙋
🙏ဆိုင်ကယ်သမားများအတွက်လဲ အထူးသင့်တော်ကာ မျက်စိကို ၁၀၀%အကာအကွယ်အပြည့်အဝ ပေးထားပါတယ်။
👉👉တစ်ဖက်မှကားမီး ဆိုင်ကယ်မီးများထိုးခြင်းကိုလဲ ကာကွယ်ပေးပါတယ်ရှင်🙋
High Way မောင်းနှင်နေရသူများ နှင့် ညဘက်ယာဉ်မောင်းပြီး အလုပ်မှပြန်လာရသူများအတွက် အလွန်သင့်တော်ပါသည်...
အောက်ပါဈေးနှုန်းများသည် ရန်ကုန်မြို့တွင်း Delivery Fee များဖြစ်ပါသည်
( တာမွေ / မင်္ဂလာတောင်ညွန့် / ပုဇွန်တောင် / ဗိုလ်တထောင် / ပန်းဆိုးတန်း / အောင်ဆန်းကွင်း - 1500 ks )
( ပန်းဘဲတန်း / ကျောက်တံတား / လမ်းမတော် / ဒဂုံ / လသာ / သာကေတ / ရန်ကင်း / ဗဟန်း / ဒေါပုံ - 2000 ks )
( အလုံ / ကြည့်မြင်တိုင် / လှိုင် / စမ်းချောင်း / လှည်းတန်း / ကမာရွတ် / ရွှေတောင်ကြား / အင်းယားလမ်း / တောင်ဥက္ကလာ / မြောက်ဥက္ကလာ / သင်္ဃန်းကျွန်း / သုဝဏ္ဏ / အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး - 2500 ks )
( သမိုင်း / ဘုရင့်နောင် / မရမ်းကုန်း / အင်းစိန်ပန်းခြံထိ / ရွှေပေါက္ကံ / တောင်ဒဂုံ / မြောက်ဒဂုံ / ဒဂုံအရှေ့ / 7/8 လမ်းဆုံ - 3000 ks )
( မင်္ဂလာဒုံ / အင်းစိန်မြို့သစ် / ဖော့ကန် / အောင်ဆန်း / တညင်းကုန်း / ရွာသာကြီး - 3500 ks )
( ထောက်ကြန့် / ရွှေပြည်သာ / လှိုင်သာယာ / ဒဂုံဆိပ်ကမ်း / ယုဇနဥယာဉ်မြို့တော် / သန်လျင် / ဒဂုံဧရာအဝေးပြေး - 4000 ks )